လှမိုးအောင် - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ – ၁ ​ဖေ​ဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
မြန်အောင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁
(၁၉၆၅-၁၂-၂၂) ဒီဇင်ဘာ ၂၂၊ ၁၉၆၅ (အသက် ၅၆)
ဦးလှမိုးအောင် (၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၆၅ မွေးဖွား) သည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ယခင် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူ မန်းဂျော်နီ နုတ်ထွက်ပြီးနောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးထင်ကျော်က ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ဦးလှမိုးအောင်သည် မြန်အောင်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ၏ မြို့နယ်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်သည်။
ဦးလှမိုးအောင်ကို ၁၉၆၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ဦးကြည်ဝင်း၊ ဒေါ်ထွေးရီတို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး စိုက်ပျိုးရေးဘွဲ့ (B.Ag) ကို ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၈၈ အရေးအခင်းကာလတွင် သပြေကုန်းတိုက်နယ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီသို့ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် သပြေကုန်းတိုက်နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အောင်နိုင်ရေး ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မြန်အောင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် ၁ မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခြင်း ခံရသည်။
↑ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်။ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်။ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း။ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး (၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈)။ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ သက်ဆွေ (၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈). "စိုက်ပျိုးရေးကို အခြေခံ၍ ဧရာဝတီတိုင်းကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်သစ် ပြောကြား".7Day Daily (၁၉၆၂). Retrieved on ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈. Archived 25 March 2018 at the Wayback Machine.
↑ ၄.၀ ၄.၁ ဧရာဝတီတိုင်း ဝန်ကြီးချုပ်သစ် ဦးလှမိုးအောင်၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း။ The Voice (၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈)။ 19 January 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လှမိုးအောင်&oldid=725973" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၆:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။